URamaphosa kumele akhuze uMalema 'ngokuphawula okunokucwasa' - Zille | isiZulu
URamaphosa kumele akhuze uMalema 'ngokuphawula okunokucwasa' - Zille
Sekuzobhekana i-EFF ne-ANC manje - Malema
UZille ungumcwasi ohamba phambili - Malema
Uhamba yedwa uMalema kuTwitter
Cape Town - UMengameli Cyril Ramaphosa kumele akhuze umholi we- EFF uJulius Malema "ngokuphawula kwakhe okunokucwasa ngokwebala", kusho uNdunankulu waseWestern Cape uHelen Zille.
"Lesi sitatimende sicwasa ngokwebala ngendlela emangalisayo kepha uMengameli Ramaphosa akaze athi vu ngaso," kusho uZille ekhuluma emhlanganweni womphakathi enxanxatheleni yezitolo eseDurbanville, eKapa.
Ubekhuluma ebhekise ekuphawuleni okwenziwe ngumholi we-EFF ngezinhlelo zeqembu zokuketula u-Athol Trollip uma sekunesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe.
NgoMgqibelo, uTrollip ushayele i-DA ihlombe ngokuqinisekisa ukuthi lowo owayengumengameli uJacob Zuma ubhekana namacala enkohlakalo.
UMalema ube esephendula kanje: "Hahaha, uyahamba mlungu. Angibadabukeli abelungu, kungumuzwa omnandi ukuthi ingane yomuntu omnyama kube yiyo eqagula ikusasa lomuntu omhlophe."
UZille uthe izinto zisemnandi kuRamaphosa okwamanje futhi ngeke aze amgxeke, kepha kumele anyuse amasokisi.